Tafadzwa Muzondo accused of sexually harassing Pauline Gundidza
Photo by Pauline Gundidza Twitter
Action Hub director Tafadzwa Muzondo is facing the music at the Harare Magistrates’ Courts for allegedly fondling urban grooves musician Pauline Gundidza’s breasts at a function in Highfield last week.
Tafadzwa Muzondo (40) was not formally charged with indecent assault when he appeared before Mbare Magistrate Mr Stanford Mambanje.
After the event, and while she was waiting for transport with her friends Mariane Kunonga and Rolland Lunga (Boss Kedha), Muzondo commented on Gundidza that she had beautiful breasts.
Harare lawyer Gwinyai Mharapara is representing Tafadzwa Muzondo.
Related Topics:FeaturedPauline GundidzaTafadzwa Muzondo
10 people perish in Gweru crash